January 2021 - Sainpwar
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကို ကြည်ညိုပြီး ထီးပေါက်ချင်သူများသာရှယ်ပါ ရွှေကြက် ငွေကြက် စီးပွားတက် ထီပေါက်စေမဲ့ အဆောင်မို့ရှယ် လိုက်ပါ🙏🙏🙏
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလသမာဓိအားကောင်းပြီးဘုန်းတန်းခိုးကြီးတာတွေကိုအများသူငါသိြီးသားဖြစ် ပါလိမ့်မယ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိူ ဖူးမြော်ပိး ကန်တော့ ၍ ရှယ်ထားပေးပါ သင်စုတောင်းသမျှ အကုန်လုံးဝ ပြည့်ဟစေမည့်ဟု ဖုန်းဘုန်းဆရာတော်ကြီး ပြောကြားသည့် 🙏🙏 မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလသမာဓိအားကောင်းပြီးဘုန်းတန်းခိုးကြီးတာတွေကိုအများသူငါသိြီးသားဖြစ် ပါလိမ့်မယ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိူ ဖူးမြော်ပိး ကန်တော့ ၍ ရှယ်ထားပေးပါ သင်စုတောင်းသမျှ အကုန်လုံးဝ ပြည့်ဟစေမည့်ဟု ဖုန်းဘုန်းဆရာတော်ကြီး ပြောကြားသည့် 🙏🙏 crd မိုငြးဖုနြးဆရာတောဘြုရားကှီး၏သီလသမာဓိအားကောငြးပှီးဘုနြးတနြးခိုးကှီးတာတှကေိုအမွားသူငါသှီးသားဖှဈ ပါလိမြ့မယြ ဆရာတောဘြုရားကှီးကိူ ဖူးမှောပြိး ကနတြော့ ၍ ရှယထြားပေးပါ သငစြုတောငြးသမွှ […]
အသက္၁၃ႏွစ္နဲ႔ ကိုယ္ဝန္(၅)လရွိခဲ့တဲ့ (၇)တန္းေက်ာင္းသူ မိန္းကေလးရဲ့ အျဖစ္
မေန႔က က်မေဆးခန္းကို ultrasound ၾကည့္ဖို႔သားအမိႏွစ္ေယာက္လာပါတယ္ သူတို႔သားအမိဝင္လာတုန္းကေတာ့..ရင္သားတဖက္မရွိ တဲ့ မိခင္ကို လွမ္းၾကည့္ရင္း.လူနာလို႔ထင္မိတာပါ။ ေနာက္ေတာ့မွ..က်မသမီးေလးရာသီ မလာတာ 3လေလာက္ရွိၿပီ..ဗိုက္မွာလည္း အလုံးေပၚေနလို႔ဆိုမွ ကေလးဗိုက္ကိုစပ္းသပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့..ဗိုက္ထဲမွာ ကိုယ္ဝန္က 5လျပည့္ခါနီးပါၿပီ..း။ ကေလးရဲ့ အသက္ကိုေသခ်ာသိခ်င္ လို႔ေမြးေန႔ေမးလိုက္မွ 13ႏွစ္နဲ႔ တစ္လ..ဗိုက္ထဲက ကိုယ္ဝန္က 5လ.. .ရွင္းရွင္းေျပာရရင္.အေမႊးေတာင္ေသခ်ာမေပါက္ေသးတဲ့ .မ်က္ႏွာ ေအးေအးေလးနဲ႔ ကေလးကိုၾကည့္ မတတ္နိုင္အေမကိုရွင္းျပေတာ့ၿပီး.သမီးရည္းစား ရွိသလားေခ်ာ့ေမးေတာ့..ရည္းစားေတာ့မရွိ… အပ်ိဳမဟုတ္တဲ့ အေဆာင္ေနသူငယ္ခ်င္း ဆီကေဘာင္းဘီယူဝတ္မိ သည္ဟုေျပာသည္..လုံးဝ မျဖစ္နိုင္ဘူး..အမွန္အတိုင္းေျပာဖို႔နည္းနည္းေလး မာန္လိုက္ေတာ့..မွ.တတန္းထဲေန.သူငယ္ခ်င္း ႏွင့္. […]
မုလအိတောင် မနက်ခင်းမှာတွေ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်ပါ တွေ့ရင်ချက်ချင်းရှဲလိုက်ပါ ဆုတောင်းပြည့်ပြီး ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်….
မုလအိတောင် မနက်ခင်းမှာတွေ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်ပါ တွေ့ရင်ချက်ချင်းရှဲလိုက်ပါ ဆုတောင်းပြည့်ပြီး ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ် ယခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်ကိုတော့လူအများကရဟန်းဒါလို့လူအများကတော့ပြောကြပါတယ် တချို့လူတွေကတော့မြတ်စွာဘုပုံရိတ်လို့ပြောနေကြပါတယ် သင်ဒို့ကောဘယ်လိုထင်လဲ မုလအိတောင် မနက်ခင်းမှာတွေ့ရတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်ပါ တွေ့ရင်ချက်ချင်းရှဲလိုက်ပါ ဆုတောင်းပြည့်ပြီး ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ယခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်ကိုတော့လူအများကရဟန်းဒါလို့လူအများကတော့ပြောကြပါတယ် တချို့လူတွေကတော့မြတ်စွာဘုပုံရိတ်လို့ပြောနေကြပါတယ် သင်ဒို့ကောဘယ်လိုထင်လဲ Unicode မုလအိတောငျ မနကျခငျးမှာတှေ့ရတဲ့ထူးခွားတဲ့ပုံရိပျပါ တှေ့ရငျခကြျခငြျးရှဲလိုကျပါ ဆုတောငျးပွညျ့ပွီး ကံကောငျးလာပါလိမျ့မယျ ယခုတှေ့မှငနြရတေဲ့ပုံရိပကြိုတော့လူအမွားကရဟနြးဒါလို့လူအမွားကတော့ပှောကှပါတယြ တခွို့လူတှကတေော့မှတစြှာဘုပုံရိတလြို့ပှောနကှပေါတယြ သငဒြို့ကောဘယလြိုထငလြဲ မုလအိတောငျ မနကျခငျးမှာတှေ့ရတဲ့ထူးခွားတဲ့ပုံရိပျပါ တှေ့ရငျခကြျခငြျးရှဲလိုကျပါ ဆုတောငျးပွညျ့ပွီး ကံကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။ ယခုတှေ့မှငနြရတေဲ့ပုံရိပကြိုတော့လူအမွားကရဟနြးဒါလို့လူအမွားကတော့ပှောကှပါတယြ တခွို့လူတှကတေော့မှတစြှာဘုပုံရိတလြို့ပှောနကှပေါတယြ သငဒြို့ကောဘယလြိုထငလြဲ
စားဝတ်နေရေး မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး သားသမီးတွေ ထားပြီး လောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားရှာပြီ
စားဝတ်နေရေး မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး သားသမီးတွေ ထားပြီး လောကကြီးကိုအရှုံးပေးသွားရှာပြီ အခုလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ကပ်ရောဂါကြီး ကြီးဆိုးနေတဲ့ ကာလာမှာလူတိုင်းနီးပါးဟာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အများဆုံး ပိတ်ပင်နေကြတဲ့အချိန်ပေါ့။ တချို့သော သူတွေ့ကလည်း ဆုဆောင်းထားတဲ့ ပစ္စည်း ဥစ္စာလေးတွေ ထုခွဲ ရောင်း ချ ဟန်မပျက်နေနိုင်စားနိုင်ကြပေမယ့်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက လူအများစုဟာ အလုပ်လက်မဲ့ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရသူ မိသားစုတွေ များပြားလှပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်းရှားပါးပြီးသားသမီးများပြား လှ […]
အမောဖောက်နေတာတောင် ဆေးရုံမတက်နိုင်ပဲ သရက်ကင်လေးတွေရောင်းနေရှာတဲ့ ကလေးလေး
ဒီနေ့ ကလေးလေးတစ်ယောက် ၈၄ လမ်း ၄၁ ဒေါင့် နားမှာ သရက်ကင်ဗန်းလေး ကိုင်ပြီး တစ်ဖက်က ရင်ဘတ်လေး ဖိလိုက် ဆိုင်ကယ်တွေကို လိုက်တားလိုက် လုပ်နေတယ်။ မျက်နှာ လှမ်းကြည့်တော့လဲ မျက်နှာက မကောင်းဘူးတစ်ယောက်မှလဲ ဆိုင်ကယ်ကို ရပ်မပေးကြဘူး။ သူ့ကြည့်ပြီး သနားလာတာနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို သူ့ဘေးနား ထိုးရပ်ပြီး ကလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ နေမကောင်းဘူးလား မေးတော့ သူအသက်ရှုတွေ ကြပ်တယ်တဲ့ အသက်ရှုမဝဘူးတဲ့ မောနေရှာတယ်။ချွေးတွေလဲ ပြန်လို့။ […]
မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးပြုံးတော်မူနေတာပါ အများဖူးမြှော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးလိုက်တယ်နော်…..
ပရိသတ်ကြီးရေမဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေတဲ့ပုံတော်လေးကိုဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပါတယ်….ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါလို့ ဆိုကြပါတယ်…. လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ခုလို လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်…မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ။ *နမောတဿ*လို့ ရေးပြီးShareပါ ကံကောင်းပြီးထူးခြားလာပါမည်။ မယုံမရှိကြနဲ့နော် ။ လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကံကောင်းခြင်း အတိတ်နမိတ်တွေပြလာပါလိမ့်မယ်။သိပ်မကြာခင်မှာဘဲ ရွှေငွေတွေ တိုးပွားပြီး ကြီးပွားချမ်းသာလာပါလိမ့်မည်။အားလုံး ဖူးမြော်ပြီး ကုသိုလ်ရကြပါစေနော်… Unicode ပရိသတ်ကြီးရေမဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေတဲ့ပုံတော်လေးကိုဖူးမြော်နိုင်အောင် မျှဝေပါတယ်….ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကြီးပွားချမ်းသာမယ့်အတိတ်နိမိတ်ပါလို့ ဆိုကြပါတယ်…. လူမှုကွန်ရက်မှာတော့ခုလို လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်…မဟာမြတ်မုနိဘုရား ပြုံးတော်မူနေပါပြီ ။ *နမောတဿ*လို့ […]
တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (31-1-2021 to 6-2-2021)
ေက်ာ္ဘိုဘိုဟိန္း၏တစ္ပတ္စာခုႏွစ္ရက္သားသမီးကံၾကမၼာေဟာကိန္း (31-1-2021 to 6-2-2021) တနဂၤေႏြသားသမီး စိတ္ေတြေထြျပားၿပီး အမွားမ်ားတတ္တဲ့ ကာလပါ ….အေတြးေတြ စိုးရိမ္စိတ္ေတြအားႀကီးၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြပါ မွားတတ္ပါတယ္ ။စိတ္နဲ႔ကိုယ္ မကပ္တဲ့ကာလပါ ။ အတတ္ႏိူင္ဆုံး သတိထားဖို႔ မွာခ်င္ပါတယ္ ။အိပ္မရျဖစ္ေနတတ္ေသာကာလပါ ….။ငယ္႐ြယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရး ကံစန္းအထူးပြင့္ေန ပါလိမ့္မည္။ ထီ ၉အစ ဝ အဆုံး ထိုးပါ …။ယၾတာ ……ဌက္ေတြ ခိုေတြ အစာမၾကာခဏ ေကြၽးေပးပါ…..။ တနလၤာသားသမီး အိမ္အနီးအနားတြင္ […]
မိန်းကလေးတွေ သတိပေးချင်လို့ ကိုယ်ချစ်လည်းမရှာနဲ့ သူချစ်လည်းမရှာပါနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲရှာကြပါ (ဖြစ်ရပ်မှန်)
မိန်းကလေးတွေ သတိပေးချင်လို့ ကိုယ်ချစ်လည်းမရှာနဲ့ သူချစ်လည်းမရှာပါနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲရှာကြပါ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ် ကလေးယူမရဘူးလို့ ဆရာဝန်မှာထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ်။(4.12.2019) သူ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ်။ ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆရာဝန်လေကလေးယူရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှာထားတယ် ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ်။ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ် သူယောကျာ်းပျော်မယ်လို့ထင်ထားတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက်ချဖို့ပြောလာတယ်။ နင်ပဲလိုချင်တယ် ငါရတော့မှ ဖျက်ချဖို့ဆိုတာ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ […]
အမျိုးသမီး အများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သားအိမ်လုံးတည်ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ အကြောင်း
အမျိုးသမီးရောဂါလေ အမျိုးသမီးရောဂါဆိုပြီးပြောကြတယ် ပြောတာကပေါ့ပေါ့လေး ဒီဝေဒနာလဲအရေးကြီးတယ်နော်ပြီးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးထုကြီးအတွက် ဖတ်မိသမျှလေးတွေCopy ကူး၍‌ေဖာ်ပြပါရစေ အဖြစ်လဲများကြတယ်လေ။ သားအိမ်အသားလုံး တည်ခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူကတော့ဖြင့် သားအိမ်မှာ အသားလုံးတည်လို့ သားအိမ်ထုတ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်သူကတော့ အသားလုံးရှိလို့ ဆေးရုံတက်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ကြားဖူးပါသလား။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒါမျိုးမကြာခဏကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါအဖြစ်များတယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့။ ဒါကဘာရောဂါလဲ။ သားအိမ်အသားလုံး တည်တဲ့ရောဂါပါ။ ဒါကဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ။ သူများတွေဖြစ်ရင် ကိုယ်ရောဖြစ်လာမှာလား။ ဆက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ သားအိမျမှအှသားလုံး ဆိုတာဘာလဲ။ ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ အသားလုံးကြီးပါ။ စာဆန်ဆန်ပြောရရင်တော့ […]
အသိဉာဏ်နည်းတဲ့ ရှေးရိုးစွဲမိဘတွေ နှင့် ပဲဆီကြောင့် မကြွေသင့်ပဲ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်
အစိုးရဆရာ၀န် လုပ်လာတဲ့တလျောက်မှာ ကိုယ့်အတွက် အခက်ခဲဆုံးကိစ္စက ကလေးတယောက်သေသွားပြီ အသက်မရှိတော့ဘူး ဆိုတာအမေဖြစ်သူကို ပြောရတဲ့ အချိန်ပဲ။ သေ‌လောက်မယ့်ရောဂါမို့လို့ ကြိုတင်ရှင်းပြထားပြီးသားဆိုရင် တော်သေး။ ရုတ်တရက် သေသွားတာမျိုးဆို သေပြီပြောတဲ့ဆရာ၀န်လုပ်သူပါ ပြသနာရှာခံထိတတ်တယ်။ လက်ခံရခက်တဲ့ သတင်းမို့လို့ တော်တော်ဖြေရှင်းရခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ဂျူတီ ဆိုရင် လဲ အဲလိုမျိုးတွေ မလာပါစေနဲ့ အမြဲဆုတောင်းပေမယ့် ကံကလဲ အရမ်းကောင်းဆိုတော့ ကိုယ့် EMO နေ့ဆို အသည်းအသန်ဖျားနာ တွေ ဆုံးပြီးသားတွေ ခနခန […]